PressReader - Isolezwe: 2018-06-15 - Sesibekezele kwanele, sicela imali yethu
Sesibekezele kwanele, sicela imali yethu
MHLELI: Sibhala le ncwadi ngokukhulu ukuzithoba siwubumbano lwezinduna. Sikhala ngezethembiso esathenjiswa zona wuNdunakulu ngomhla ka-30 Agasti 2016 zokukhokhelwa ama-backpay. Silindile manje siyabona ukuthi omasipala bazophinda futhi bayisebenzise imali okumele siyithole.
Njengoba amaphephandaba esitshela ukuthi yasetshenziswa omasipala siyacela siyizinduna zamamkhosi ukuthi ingapheli le nyanga singayitholanga. Asifuni ukugijima emgwaqweni ngoba singabaholi abahloniphayo.
Siyacela futhi ukuthi imali esiyiholayo ingavezwa emaphephandabeni njengoba kwavezwa kwelangomhla ka-4 Mashi elalichaza ukuthi izinduna zihola imali engakanani ngenyanga. Thina okwethu kunekelwa izwe kodwa abekho abanye okunekwa imali abayiholayo emaphepheni.
Siyacela siyizinduna zamakhosi ukuthi akuhlonishwe nathi okwethu. Siyacela futhi kungqongqoshe nakuNdunankulu ukuthi isithembiso sabo sifezeke kule nyanga. Sitshelwa ukuthi imali yethu isetshenziswe womasipala, thina ngoba singayidingi yini?
Ake basisize bakhulume nomasipala babatshele ukuthi izinduna ziyakhala sezibekezele kwanele manje zifuna imali yazo.